Antsafa niarahana tamin’i Marco Antonio Martínez Pérez, mpikatroka nomerika ho an’ny fiteny Ayöök · Global Voices teny Malagasy
Marco no mampiantrano ny kaonty Twitter @ActLenguas ny 3 hatramin'ny 9 Febroary 2020.
Voadika ny 25 Febroary 2020 17:00 GMT
Saripika nozarain'i Marco Antonio Martínez Pérez.
Ny taona 2020, hotohizantsika ny fanentanana ety anaty media sôsialy hanasàntsika olona maro hitantana ny kaonty Twitter, @ActLenguas (Fikatrohana ho an'ny fiteny) ka hizaran'izy ireny ny niainan-dry zareo tamin'ny tamin'ny famelomana indray sy fisoloana vava ireo fiteny zanatany. Resahan'ity lahatsoratra fampahafantarana ity ny momba an'i Marco Antonio Martínez Pérez (@AyuukMarco) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Marco Antonio Martínez Pérez no anarako, avy amin'ny vondrompiarahamonina Maaxïnkojm ao Sierra Mixe any Oaxaca, Meksika. Miteny ny fiteny Ayöök, iray amin'ireo sakeliky ny fiteny Mixe. Mpianatra manomana ny diplaoma bakalaoreà momba ny fitantanana ary afaka nandray anjara taminà tetikasa isankarazany natao hanohanana ny fiteny, taminà sehatra toy ny onjampeo, atrikasa, ary ny aterineto.
Isan'ny ao anatin'ny tarika Kumoontun aho, fikambanana sivily iray tsy mitady tombony ara-bola ary mikatsaka ny hanohana sy handray anjara amin'ireo tetikasa koltoraly any anatin'ireo vondrompiarahamonina teratany ao Sierra Mixe ao Oaxaca.
Iray amin'ireo laharam-pahamehana amin'ny asanay ny fanamafisana ny tenindreninay. Mba hahatontosa izany, foroninay ireo fitaovana afaka hanamora ny fampianaranay ny fiteny Ayöök amin'ny alàlan'ny atrikasa famakiana-fanoratana atao any anatin'ireo vondrompiarahamonina. Ohatra, tamin'ny 2018, natombokay ny Fampiasa Kumoontun ary ny boky misy feo “Ayöök Stories.” Afaka alaina maimaimpoana avy amin'ny fitaovana rehetra izy ireny. Misy torohay bebe kokoa ao amin'ny tambajotra sosialin'ny @Kumoontun sy @AyuukMarco.
Toy ny ankamaroan'ireo teny teratany rehetra ao Meksika, natao anjorom-bala ny fiteninay , indrindra fa any an-tsekoly izay ny fiteny Espaniôla irery ihany no ifandraisana. Sady koa, zara raha hita izy aty anaty aterineto, saingy voamariko fa mihamaro ireo mpampiasa no mifandray ety anaty tambajotra amin'ny fampiasàna ny fiteny Ayöök, ohatra, any anaty hafatra WhatsApp, sy ireo tambajotra sôsialy hafa.
Tiako ny hiresaka sy hizara ny momba an'i Maaxïnkojm – tanànako – sy ireo rafi-pandaminany, ny fety fankalàzany, ny dikan'ny katsaka, ny sakafonay ary ny fifandraisanay amin'ny natiora.
Tiako ny hizara momba ny tetikasanay ho an'ny Kumoontun amin'ity taona ity, ny vokatra azonay ary ireo fanamby atrehanay ety anaty aterineto.
Tiako ihany koa ny hiresaka momba ireo fandraisana anjara eo amin'ny sehatry ny faritra ho fanohanna ny fiteny Mixe, ary hizara votoaty sy kisary arahana torohay amin'ny fiteny Ayöök.
Ny mandrisika ahy dia ny hoe ireo mpiteny ny fiteny teratany mba ho afaka ny hanana vintana mitovy amin'ny fampianarana, fahasalamàna, fitsaràna, ankoatry ny maro hafa, sy tsy hizaka fanavakavahana. Io no antony iheverako hoe zavadehibe ny fanapariahana ny hamaroam-piteny. Satria, raha toa isika tonga saina amin'io hamaroana io, dia afaka ny hiaraka hiaina sy hanana fiainana tsara kokoa.
Ny nofiko ho an'ny fiteniko dia ny mba hahitàna azy any anaty habaka isankarazany sy ny hoe izahay mpiteny azy mba ho liana amin'ny fanaovana tetikasa maromaro kokoa ho fanohanana ny fiteninay. Amin'ny maha-ao anatin'ny tarika Kumooontun ahy, nofiko ny hoe mba ho afaka haka aingampanahy aminay ireo vondrompiarahamonina hafa ka hamorona tetikasa ho an'ny tenindrenin-dry zareo.